इमरान खान सरकारको अक्षमताको आलोचना , ईमरान खानले राजीनामा दिनु पर्ने – बिलावल - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय इमरान खान सरकारको अक्षमताको आलोचना , ईमरान खानले राजीनामा दिनु पर्ने –...
इमरान खान सरकारको अक्षमताको आलोचना , ईमरान खानले राजीनामा दिनु पर्ने – बिलावल
इस्लामावाद – पाकिस्तानमा चलिरहेको ग्यास संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पीपीपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले आइतबार इमरान खान सरकारको अक्षमताको आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको कारण खानको राजीनामा पछि जनताका सबै समस्याको समाधान हुने दाबी गरेका छन्। भुट्टोले सत्तारुढ पीटीआई नेतृत्व इमरान खान सरकारले लगातार संकट सिर्जना गरिरहेको र जनताको दुःखमा वृद्धि गरिरहेको बताएका छन्।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पीटीआई नेतृत्वको सरकारको नीतिका कारण भोका र पीडित नागरिकहरूसँग माफी माग्नुपर्नेसमेत उनले बताएका छन्। विद्यमान ग्यास संकटका बारेमा भुट्टोले सरकारले समयमै एलएनजी आयात गरेको भए मुलुकमा ग्यास संकट नहुने बताएका छन्।
उनले पीटीआई सरकारले गरेको ग्यासको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण प्रभावित भएको पनि बताएका छन्। पीपीपी अध्यक्षले शुक्रबार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) को प्रमुखसँग भेटेर इमरान खान सरकारविरुद्ध संयुक्त रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको एक दिनपछि उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
जरदारीले प्रमुख विपक्षी दलहरू पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) को नेतृत्व गरिरहेका मौलाना फजलुर रहमानलाई भेटेका थिए। बैठक पीडीएमले इस्लामावाद तर्फ लामो मार्च अघि पाकिस्तानभर महंगाई मार्च गर्ने घोषणा गरेका थिए।
पीडीएमले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई लिएर सरकारविरुद्ध कराँची, क्वेटा, लाहोर र पेशावरमा र्‍याली गर्ने जानकारी दिएको । अन्य हालैका घटनाक्रमहरूमा, इमरान खान सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रति लीटर ८ पाकिस्तानी रुपैयाँले बृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ। एक दिन पछि प्रधानमन्त्रीले अन्य ईन्धनको मूल्य बढाउनु अवस्था आएको चेतावनी दिएका हुन्।
यसबाहेक, रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि पाकिस्तानमा मुद्रास्फीतिको दर विश्वमा चौथो उच्च हो, जसले इमरान खान सरकारविरुद्ध अशान्ति र विरोध प्रदर्शन गर्न सक्छ। कराचीको एक परिवारमा भएको घटनालाई उद्धृत गर्दै शाह मीर बलोचले द गार्डियनमा लेखेका छन्, आकाश छाएको मूल्यको कारणले आफ्नो खर्च धान्न वा घर पठाउन नसकेपछि एक जुत्ता बिक्रेताले आफूलाई आगो लगाएका थिए।
Previous article“चिनीया लगानी, निर्माण र हस्तक्षेपकारी भुमिका”
Next articleधार्मिक अतिवादीहरूको भिडले श्रीलंकाका एक प्रबन्धकलाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट र जिउँदै जलाए के ईश्वर निन्दा ?
Peng Shuai को हुन कहाँ छिन ? चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्व उपप्रधानमन्त्री झाङ गाओलीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप
भिडियो गेम उद्योगमा अधिनायकवादको तिर्छे नजर, राजनीतिक अभिष्ट पुर्तिका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने